Manchester City Oo Wadahadalo Horumar Leh Ka Sameyneysa Heshiiska Cusub Ee Foden
HomeWararka CiyaarahaManchester City oo wadahadalo horumar leh ka sameyneysa heshiiska cusub ee Foden
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester City Phil Foden ayaa wadahadalo horumar leh kula jira kooxda oo ku aadan qandaraaskiisa cusub.
Foden hadda waxaa uga harsan saddex sano qandaraaskiisa oo dhacaya xagaaga 2024 -ka.
Wararka ayaa sheegaya in City ay si dhaqso leh ugu dhaqaaqeyso qandaraas cusub iyadoo wadahadalada lagu wado inay dib u bilowdaan marka uu ka soo laabto waajibaadka England.
Ma jiro wax heshiis ah oo weli la soo gabagabeeyay laakiin Foden ayaa aad u daneynaya inuu kordhiyo joogitaankiisa kooxda waxaana la rumeysan yahay inaysan jirin caqabado waaweyn oo hortaagan heshiis cusub.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England ayaa saxiixay heshiiskiisa haatan ee kooxda sanadkii 2018 isagoo mushaar ahaan u qaadan doona ku dhawaad ​​£ 30,000-toddobaadkii.